Andro fankalazana ao amin' ny jodaisma - Wikipedia
Andro fankalazana ao amin' ny jodaisma
Ny andro fankalazana ao amin' ny jodaisma dia andro tsy maintsy hajaina sady ahatsiarovana ny zava-dehibe nitranga teo amin' ny tantaran' ny Jiosy, ka 150 andro ny fitambaran' izany ao anatin' ny iray taona.
1 Ny Sabata
1.1 Ny Sabata araka ny Baiboly hebreo
1.2 Fari-potoan' ny Sabata
1.3 Fitandremana ny Sabata
2 Ny andro fankalazana hafa
2.1 Fankalazana anaovana fivahiniana masina
2.1.1 Ny Pesakh
2.1.2 Ny Shavuot
2.1.3 Ny Sukkot
2.2 Fankalazana tsy anaovana fivahiniana masina
2.2.1 Ny Rosh ha-Shana
2.2.2 Ny Yom Kippur
2.2.3 Ny Shemini Atseret
2.2.4 Ny Simkhat Torah
2.2.5 Ny Khanukka
2.2.6 Ny Tu bi-Shevat
2.2.7 Ny Purim
Ny litorjia dia mandidy fotoam-panompoana telo isan' andro. Ny Sabata sy ny andro firavoravoana dia misy fotoam-panompoana iray fanampiny atao amin' ny maraina.
Ny Sabata, izay atao hoe שָׁבַת / Shabbat amin' ny teny hebreo, dia andro fitsaharana izay mifanandrify amin' ny andro fahafito amin' ny herinandro jiosy, izany hoe ny Asabotsy.
Ny Sabata araka ny Baiboly hebreoHanova
Araka ny voalaza ao amin' ny Baiboly dia nasain' Andriamanitra notandreman' ny Zanak' i Israely ny andro Sabata. Voaresaka ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly ny amin' ny Sabata: ao amin' ny Genesisy (Gen. 2.2-3), ao amin' ny Eksodosy (Eks. 20.8-11), ao amin' ny Deoterônômia (Deo. 5.12-15) ary ao amin' ny Levitikosy. Hita ao amin' ireo bokin' ny mpaminany sy ny soratra hafa koa ny amin' ny Sabata.
Fari-potoan' ny SabataHanova
Ankehitriny, ny andro Sabata dia manomboka amin' ny Zoma hariva, 18 mn alohan' ny filentehan' ny masoandro ka mifarana amin' ny Asabotsy aorian' ny fisehoan' ny kintana telo antonontonony (40 mn eo ho eo aorian' ny filentehan' ny masoandro), izany hoe eo anelanelan' ny 25 ora sy 25 ora 30 mn arakaraka ny fizaràn-taona.
Fitandremana ny SabataHanova
Zava-dehibe indrindra ao amin' ny jodaisma ny andro Sabata ka hajain' ny Jiosy fatratra. Ny olona tsirairay dia tokony hampitsahatra na hampihena araka izay azo atao ny asa rehetra amin' ny andro Sabata mba hifantohany amin' ny fianakaviany sy ny ankohonany. Andro tsy fiasana ara-panjakana ny andro Sabata ao amin' ny Fanjakan' i Israely ka mahazo ny trano fivarotana sy ny fitaterana izany.
Ny andro fankalazana hafaHanova
Maromaro ireo andro ankalazain' ny Jiosy ka ny sasany efa natao araka ny voasoratra ao amin' ny Tanakh fa ny sisa niforonina taty aoriana. Ireto avy ireo fety jiosy ankalazaina isan-taona. Ny andro fankalazana ifandian-kanina dia ny andron' ny taom-baovao (hebreo: רֹאשׁ הַשָּׁנָה/ rosh hashanah) sy ny andron' ny famelan-keloka (hebreo: יוֹם כִּיפּוּר / Yom kippur) izay atokana manontolo amin' ny vavaka sy ny fifadian-kanina.
Fankalazana anaovana fivahiniana masinaHanova
Ny Pesakh (hebreo: פֶּסַח) io no Paska jiosy; ahatsiarovana ny nandalovan' ny fahafatesana eny ambonin' ny tranon' ireo Jiosy tany Ejipta ka tsy nahafaty ny voalohan-terany sady ahatsiarovana koa ny fialan' ny Zanak' i Isiraely avy tao Ejipta sy ny niampitan' izy ireo ny Ranomasina Mena teo ambany fitarihan' i Mosesy (na Moizy). Ankalazaina isan-taona anatin' ny fito na valo andro manomboka amin' ny faha-14 na 15n' ny volana Nisan hatramin' ny 22 Nisana amin' ny filentehan' ny masoandro ny Paska jiosy.
Fitambarana fankalazana roa samy voalaza ao amin' ny Testamenta Taloha ny paska jiosy. Ny fankalazana voalohany dia ny fanaovana fanatitra amin' ny andron' ny Pesa'h (hebreo: kornban pesa'h) anaovana sorona ondrilahy kely iray taona tsy misy kilema izay tanterahin' ny loham-pianakaviana amin' ny harivan' ny faha-14n' ny volana Nisan. Ny faharoa dia fankalazana ny mofo tsy misy masirasira (hebreo: hag haatzot) izay ahatsiarovana ny fivoahana avy ao Egipta. Maharitra herinandro ny fankalazana sady tsy azo ihinanana mofo misy masirasira.
Ny Shavuot (hebreo: שבועות "herinandro") na Pentekôsta dia ankalazana ny fijinjana ny varimbazaha sy ahatsiarovana ny nanomezan' Andriamanitra ny Torah tany an-tendrombohitra Sinay. Ankalazaina amin' ny 6 Sivan ny Shavuot.
Ny Sukkot (hebreo: חַג הַסֻּכּוֹת / Hag ha-Sukkot "fetin' ny trano lay" na "fetin' ny tabernakely") dia ahatsiarovana an-kafaliana ny nanampian' Andriamanitra ny Zanak' i Isiraely tamin' ny nivoahany avy any Egipta, ahatsiarovana ny fivahiniana mandritra ny 40 taona tany an-tany efitra taorian' ny fivoahana avy tany Egipta, ary iravoravoana amin' ny fahataperan' ny tsingerin' ny fotoam-pambolena amin' ny taona. Ankalazaina manomboka amin' ny 15 ka miafara amin' ny 21 (na 22) Tishri ny Sukkot.
Fankalazana tsy anaovana fivahiniana masinaHanova
Ny Rosh ha-ShanaHanova
Ny Rosh ha-Shana (hebreo: רֹאשׁ הַשָּׁנָה "fiantombohan' ny taona" na יוֹם תְּרוּעָה‬ /Yom Teruah "androm-piantsoana") dia ankalazana ny taom-baovao ivelan' ny fivavahana. Ankalazaina amin' ny 1 sy 2 Tishri ny Rosh ha-Shana (ny taom-baovaom-pivavahana dia ny 1 Nisan).
Ny Yom KippurHanova
Ny Yom Kippur (hebreo: יוֹם כִּיפּוּר‬ na יום הכיפורים / Yom ha-Kippurim "andron' ny famelan-keloka" na "androm-panavotana") dia anaovana fifadian-kanina sy vavaka be. Tanteraihina amin' ny 10 Tishri ny Yom Kippur.
Ny Shemini AtseretHanova
Ny Shemini Atseret (hebreo:שְׁמִינִי עֲצֶרֶת‬ "valo andro fivoriana" na יּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת / Yom ha-Shemini Atseret "fetim-pamaranana amin' ny faha-valo andro") dia anombohan' ny fotoana irotsahan' ny rononorana ao Israely. Ankalazaina amin' ny 22 Tishri ny Shemini Atseret.
Ny Simkhat TorahHanova
Ny Simkhat Torah (hebreo: שמחת תורה / "hafalian' ny Lalàna") dia ankalazana ny Torah ("Lalàna") ka itondrana am-pilaharana ny horonam-boky mirakitra azy. Tanterahina amin' ny 22 sy 23 Tishri ny Simkhat Torah.
Ny Khanukka (hebreo: חג החנוכה / Hag ha-Khanukka "fetin' ny fanorenana") dia ahatsiarovana ny fitokanana indray ny alitara fanaovam-panatitra ao amin' ny Tempoly Faharoa tao Jerosalema, tamin' ny fiverenana amin' ny fanompoam-pivavahana jiosy, telo taona taorian' ny nandraran' i Antiôkôsy IV (Seleokida) an' izany. Ankalazaina manomboka amin' ny 25 Kislev hatramin' ny 2 Tevet ny Khanukka.
Ny Tu bi-ShevatHanova
Ny Tu bi-Shevat (hebreo: ט"ו בִּשְׁבָט na חֲמִשָּׁה עָשָׂר בִּשְׁבָט / "dimy ambin' ny folo andron' ny Shevat")dia fankalazana ny taom-baovaon' ny hazo izay tanterahina amin' ny 15 Shevat.
Ny Purim (hebreo: פּוּרִים / He-Purim) dia ahatsiarovana ny nanavotan' i Estera ny Jiosy tamin' ny fanenjehan' i Hamana. Ankalazaina amin' ny 14 (sy 15) Adar izany fety izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andro_fankalazana_ao_amin%27_ny_jodaisma&oldid=1037325"
Dernière modification le 5 Septambra 2021, à 06:42
Voaova farany tamin'ny 5 Septambra 2021 amin'ny 06:42 ity pejy ity.